Gazety maneran-tany - laharana 11 - ny volana martsa
Home » About us » Newsletters » Gazety maneran-tany - laharana 11
Gazety maneran-tany - laharana 11
16 / 11 / 2019 16 / 11 / 2019 ny Antonio Gancedo
Ao amin'ity Bulletin ity dia hiatrehana ireo hetsika izay natao tamin'ny hetsika Mar de Paz Maditer ranomasina, nanomboka hatrany am-piandohan'ny fahatongavan'izy ireo tao Barcelona izay nisy ny fivoriana tao amin'ny Peace Boat of the Hibakushas, ​​ireo Japoney tafavoaka tamin'ny Hiroshima sy ny Bomba Nagasaki, Ilay sambo sambo milamina ao Barcelona.
Ny 27 tamin'ny Oktobra of 2019 avy any Genoa dia manomboka ny "Ranomasin'ny Ranomasina Milamina", ny làlana an-dranomasina an'ny 2 World martsa ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fandriam-pahalemana.
Ho ampahany amin'ny lalan'ny martsa, izay nanomboka tamin'ny kaontinanta dimy, avy ao an-drenivohitr'i Liguria nanomboka ny dia ny sambo "Peace Peace", notohanan'ny Komity Iraisam-pirenena amin'ny volana martsa, niara-niasa tamin'ny: Fundación Eksodosy fanomezana I Antonio Mazzi izay nampanao ny iray amin'ireo sambo roa an'ny Community of the Island of Elba, ny fikambanana ho fampiroboroboana ny kolontsaina an-dranomasina La Nave di Carta della Spezia sy ny Union Italiana an'i Vela Solidaria (Uvs).
Tamin'ny Oktobra 27 avy amin'ny 2019, ao amin'ny 18: 00, ny Bamboo dia mamoaka fatorana ary manomboka ny lalana napetraka. Ny hetsika «Ranomasim-pihavanana Mediterane» dia manaja labozia ary miala ao Genoa.
Manomboka ny dianay ao Genoa izahay hahatadidy fa any amin'ireo seranana te-hanidy ny mpifindra monina sy ny mpitsoa-ponenana, dia raisina ny fandraisana entana feno fitaovam-piadiana.
Eo an-tampon'ny Perquerolles sy amin'ny faravodilanitra isika, dia tsipika iray. Izy io dia tokony ho iray amin'ny mari-dranomasina frantsay niokleary an'ny toby marik'i Toulon.
Bikao, Oktobra 27
Bikao, Oktobra 28
Bikao, Oktobra 29
Tamin'ny Oktobra 30, mialoha, nandry tao Marseille ny Bamboo, tao amin'ny Société Nautique de Marseille, toerana iray manan-danja amin'ny tantaran'ny nautical tao an-tanàna.
Ny tolakandro, miditra amin'ny sambo avy any Marseille mankany l'Estaque izahay. Ao Thalassantè, dia misakafo hariva ary miresaka ary mihira isika hihira ho an'ny fandriampahalemana.
Ao Barcelona, ​​ao amin'ny seranan'i Oneocean Pot Vell, ny Bamboo miaraka amin'ny sainan'ny fandriam-pahalemana dia asehontsika ny seranan-tsambo feno sambo izay mampiantrano fa tsy sambo manilika.
Bikao, Oktobra 30
Bikao, Oktobra 31
Logbook, Novambra 1-2
Niresaka momba ny zava-nitranga tao an-tanàna izahay ary nahazo an'i Nariko Sakashita, Hibakusha, tafavoaka tamin'ny baomba nokleary Hiroshima.
Tamin'ny andro 5, tany Barcelona izahay dia tao amin'ny Peace Boat, sambo iray izay ampiasain'ny ONG Japoney iray ihany ny anarana, izay nandritra ny taona maro no nanoloran-tena ny 35 hanaparitaka ny kolontsaina fandriampahalemana.
Ao anatin'ny rafitry ny 2 World March, miaraka amin'ny fandraisana anjara ny "Ranomasin'ny Ranomasina Milamina", ny volana martsa dia naseho tao anaty sambo Peace.
Logbook, Novambra 3
Logbook, Novambra 5
Diabe manerantany amin'ny sambo sambo fandriampahalemana
Ny fandehanana fihavanana amin'ny sambo dia tsy mitovy amin'ny fandehanana amin'ny lalana iray. Amin'ny alàlan'ny toetr'andro ratsy dia handalo atsinanan'i Sardinia isika.
30 kilaometatra miala ny morontsiraka, ny Bamboo dia miditra mangina. Fantatsika ny andro ratsy. Farany, tamin'ny andro 8 dia miantso avy amin'ny sambo, vizana nefa feno hafaliana.
Ny fikambanana ICAN dia mivory ao amin'ny Peace Boat any Barcelona.
Logbook, Novambra 6
Bikao, 7-8-9 Novambra
Fikambanana ICAN ao amin'ny sambo Peace Peace
Goatemala: Ayutla, SF Retalhuleu ary Quetzaltenango
Logbook, alina 9 ary 10 hatramin'ny Novambra 15